Ungakondla Kanjani Okuthunyelwe Kwakho Kwebhulogi Ye-WordPress Ngomaka Esifanekiso Sakho Se-ActiveCampaign | Martech Zone
Sisebenzela ukuthuthukisa olunye uhambo lwe-imeyili kuklayenti eliphromotha izinhlobo eziningi zemikhiqizo kulo WordPress indawo. Ngamunye we I-ActiveCampaign izifanekiso ze-imeyili esizakhayo zenziwe ngendlela oyifisayo kakhulu kumkhiqizo ewukhangisayo futhi ehlinzeka ngokuqukethwe kuwo.
Kunokuba sibhale kabusha okuningi okuqukethwe osekukhiqizwe kahle futhi kufomethwe kahle kusayithi le-WordPress, sihlanganise ibhulogi yabo kuzifanekiso zabo ze-imeyili. Nokho, ibhulogi yabo ihlanganisa imikhiqizo eminingi ngakho kudingeke ukuthi sihlunge okuphakelayo kwesifanekiso ngasinye ngokuhlanganisa kuphela okuthunyelwe kwebhulogi okumakwe umkhiqizo.
Lokhu kukhomba ukubaluleka ukumaka izindatshana zakho! Ngokumaka izindatshana zakho, kulula kakhulu ukubuza nokuhlanganisa okuqukethwe kwakho kwezinye izinkundla njenge-imeyili.
I-WordPress Tag Feed yakho
Uma ubungakayiboni, i-WordPress inohlelo lokuphakelayo oluqine ngendlela emangalisayo. Ungase ucabange ukuthi isayithi lakho lilinganiselwe kuphela kokuphakelayo kwebhulogi yakho eyodwa. Akunjalo... ungakwazi ukukhiqiza kalula okuphakelayo okusekelwe esigabeni noma okusekelwe kumaka kusayithi lakho. Iklayenti lethu kulesi sibonelo I-Royal Spa, kanye nezifanekiso ezimbili ezidaliwe eze Izibhebhe Ezishisayo futhi Amathangi Antanta.
Okuthunyelwe kwabo kwamabhulogi akuhlukaniswa ngohlobo lomkhiqizo, ngakho sisebenzise omaka esikhundleni salokho. Indlela ye-permalink yokufinyelela okuphakelayo kwakho i-URL yebhulogi yakho elandelwa umaka we-slug nomaka wakho wangempela. Ngakho-ke, ngeRoyal Spa:
I-Royal Spa Blog: https://www.royalspa.com/blog/
Imibhalo Ye-Royal Spa Emakiwe Amashubhu Ashisayo: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Imibhalo Ye-Royal Spa Emakiwe Yamathangi Okuntanta: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
Ukuze uthole I-Really Simple Syndication (RSS) feed kuleyo naleyo, ungavele wengeze /uphakele ku-URL:
Okuphakelayo kwebhulogi ye-Royal Spa: https://www.royalspa.com/blog/okuphakelayo/
Izindatshana ze-Royal Spa ezimakwe kuma-Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/okuphakelayo/
Imibhalo Ye-Royal Spa Emakiwe Yamathangi Okuntanta: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/okuphakelayo/
Ungakwenza lokhu futhi nge-querystring:
Okuphakelayo kwebhulogi ye-Royal Spa: https://www.royalspa.com/blog/?okuphakelayo=rss2
Izindatshana ze-Royal Spa ezimakwe kuma-Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/?tag=amashubhu ashisayo&feed=rss2
Imibhalo Ye-Royal Spa Emakiwe Yamathangi Okuntanta: https://www.royalspa.com/blog/?tag=i-float-tank&feed=rss2
Ungakwazi ngisho nokubuza omaka abaningi ngale ndlela:
Izindatshana ze-Royal Spa ezimakwe Ngamathangi Float kanye nama-Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/?tag=ithangi le-float,i-hot-tub&feed=rss2
Uma usebenzisa izigaba, ungasebenzisa isigaba sama-slugs (okuhlanganisa isigaba esingaphansi) kanye namathegi... nasi isibonelo:
Ungabona ukuthi kungani lokhu kubaluleke kakhulu njengoba uphinda uhlose okuqukethwe kwezinye izisetshenziswa. Sikhuthaza wonke amakhasimende ethu ukuthi afake izindatshana zawo ezincwadini zawo zezindaba, ama-imeyili okukhangisa, kanye nama-imeyili awo okwenziwayo. Okuqukethwe okwengeziwe kungacebisa i-imeyili yabo, kube nezinzuzo ezimbalwa:
Abanye abahlinzeki bebhokisi lemeyili' ama-algorithms okubekwa kwebhokisi lokungenayo jabulela okuqukethwe okubhaliwe kuma-imeyili.
Izindatshana ezengeziwe zihambisana kakhulu nesihloko, ukwandisa ukuzibandakanya nababhalisile bakho.
Yize ingeke iqondise ababhalisile bakho kubizo lokubizelwa esenzweni kanye nenjongo eyinhloko ye-imeyili yakho, ingakunikeza inani elingeziwe futhi yehlisa ukuxova kwababhalisile bakho.
Utshale imali kulokho okuqukethwe, ngakho kungani ungakwenzi kabusha inhloso yakho ukwandisa inzuzo yayo ekutshalweni kwezimali?
Engeza Okuphakelayo kwe-RSS ku-ActiveCampaign
Ku-ActiveCampaign, kulula ukungeza Okuphakelayo kwe-RSS:
Vula i-ActiveCampaign bese uzulazulela ku- Imikhankaso > Phatha Izifanekiso.
Vula isifanekiso esikhona (ngokuchofoza kuso), Ngenisa Isifanekiso, noma chofoza Dala Isifanekiso.
Eyodwa yemenyu engakwesokudla, khetha Faka > Amabhulokhi > Okuphakelayo kwe-RSS.
Lokhu kuvula I-RSS Feed Builder ifasitela lapho ungafaka khona ikheli lakho Lokuphakelayo futhi uhlole kuqala okuphakelayo:
Enza ngendlela oyifisayo i- RSS Feed. Kulokhu, ngifuna nje isihloko esixhumene esilula nencazelo emfushane:
Uzobona manje Okuphakelayo kusifanekiso sakho se-imeyili, lapho ungashintsha khona isakhiwo ngendlela ofisa ngayo.
Ingxenye engcono kakhulu yale ndlela yokusebenza ukuthi manje asikho isidingo sokubuyekeza okuqukethwe ngokuphindaphindiwe kuma-imeyili nohambo njengoba uqhubeka nokushicilela okuqukethwe okusha kubhulogi yakho.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we I-ActiveCampaign futhi inkampani yami isiza amakhasimende ngokuthuthukile WordPress ukuthuthukiswa, ukuhlanganiswa, kanye nesu lokumaketha okuzenzakalelayo nokusebenza. Xhumana nathi ku Highbridge.
Tags: I-ActiveCampaignamathegi ebhulogiokuphakelayo kwesigabaokuphakelayo ngokwezifisoimeyili Marketingfeedngempela umane syndicationI-spa yasebukhosiniRSSrss feedrss feed umakhirss ku-imeyiliukuhlanganisaokuphakelayo komakaukumakaWordPressokuphakelayo kwe-wordpressi-wordpress tag feed